Ndụmọdụ Archives - 1aviagem.com
Nke a bụ atụmatụ site n'aka mba.
Uruguay bụ mba dị iche na South America. - Montevideo
N'iji oge efu na kwarantaini a, ekpebiri m ịhụ foto site na njem ochie na… achọpụtara m na enwere m ọtụtụ ihe iji melite blog karịa ka m chere. Yabụ taa, aga m ekwu ntakịrị ihe gbasara Uruguay. Mba nke dị nnọọ iche na South America, n'ihi gịnị? N'ihi atumatu ọhaneze ha. Na…
GỤKWUO Uruguay bụ mba dị iche na South America. - Montevideo
Ajụjụ ọnụ a onye Brazil, kedu ka ahụmịhe nke mgbanwe? - Firenze - Italy
Kedu ka ahụmịhe nke mgbanwe? Taa, anyị ga-ewetara gị ntakịrị ihe ihe ahụmịhe ịmụ mba ọzọ dị ka ya. Iji mee nke a, m ga-atụkwasị obi na enyemaka ahụ. N’ezie, anyị zutere mgbe ọ bịara Brasilia ime emume ụbọchị nwanne ya nwanyị. Ọ sonyere na mmemme “Science enweghị ala” ma nwee nnukwu…
GỤKWUO Ajụjụ ọnụ a onye Brazil, kedu ka ahụmịhe nke mgbanwe? - Firenze - Italy
N'oge na-adịbeghị anya na Brazil enwere ọtụtụ okwu banyere agha echere na echiche, n'etiti ndị na-eche "kachasị mma" megide ndị na-eche "karịa n'aka ekpe". Mana ị maara ihe okwu ndị a pụtara? Tupu anyị amalite, ka anyị hụ ebe okwu ndị a sitere. Mmalite nke aka ekpe na aka nri.…
Ndị obodo, ebe anyị nọ na iche, m kpebiri ịtụle ụfọdụ foto ochie na n'etiti ha ahụrụ m ụfọdụ njem mbụ m na Paraguay. M wee chee: Ha, ha anaghị ekwu ihe ọ bụla gbasara Paraguay, gịnị mere na agaghị m ekwu ntakịrị ihe gbasara ya? Na nke a bụ nsonaazụ. Ebee ka? Paraguay dị na South America ...
GỤKWUO Shoppingzụ ahịa na Ciudad Del Este bara uru? - Paraguay
Mgbapụ - Brasilia - Brazil
Enwere 10.114 gburu na 09/05/2020 (yana ịrị elu), ndị a bụ naanị n'ihi COVID-19. Ndi oke a gbagoro agbagoro maka ndị chọrọ ihu ọnụ ọgụgụ ugwu ga-eme? Kedu otu ị ga - esi chekwa akụ na ụba na ndị ọrụ nwụrụ anwụ? Kedu otu ị si adọta ndị na - etinye ego si mba ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ijikọta ihe oyiyi ha na ọnwụ? Ha…
GỤKWUO Mgbapụ - Brasilia - Brazil
-Bọchị atọ nke Bariloche - Argentina
Oge njem ụbọchị 3 maka Bariloche - Argentina Ma n'oge a na ichekwa iche, ọ nweghị ihe dị mma karịa iwere ọba ochie na ilele foto. Nke kpọghachitere m njem mbụ m na Bariloche, nke dị na Argentina. Anọpụrụghị m ụbọchị atọ n'obodo ahụ, jisiri ike nweta ọdụ ụgbọ abụọ. Anyanwụ na snow. NA…
GỤKWUO -Bọchị atọ nke Bariloche - Argentina
Ndị Mayan na amụma nke njedebe nke ụwa - Mexico
Gịnị ka ndị Mayan ga-akụziri anyị gbasara ọgwụgwụ ụwa? N'oge ụfọdụ gara aga, na 2012, ọtụtụ ndị nụrụ banyere njedebe nke ụwa. A zụlitere ọtụtụ ihe omimi gburugburu mmepeanya Mayan. A sị ka e kwuwe, asịrị ahụ kwuru na dabere na kalenda Mayan, ụwa ga-akwụsị na…
GỤKWUO Ndị Mayan na amụma nke njedebe nke ụwa - Mexico
Pilanesberg Park - safari na foto ụmụ anụmanụ - South Africa
Ndewo, ihe ngbasa a ga - abu ngwurita nke ndụmọdụ na akparamagwa anumanu a muru n’oge njem m gara South Africa. ime safari ulo ihe omuma. O…
GỤKWUO Pilanesberg Park - safari na foto ụmụ anụmanụ - South Africa
Kedụ ka enwere ike ịnweta ụgbọ njem ọha na-akwụghị ụgwọ? - Estonia - Tallinn
Na njem mbụ anyị na Tallinn, isi obodo Estonia, mgbe anyị rutere ọdụ ụgbọ elu mba ụwa juru ọdụ ụgbọ elu na-adịghị ahụkebe. N’ezie ihe ọ dị ka ya bụ na e mere ya ka ọ bụrụ otu n’ime ọdụ ụgbọ elu kacha dị jụụ ma maa mma ịnọ n’ime ya. Ekwuputara m na n'oge njem m ụgbọ elu ole na ole yiri ka…
GỤKWUO Kedụ ka enwere ike ịnweta ụgbọ njem ọha na-akwụghị ụgwọ? - Estonia - Tallinn
Ihe ị ga-eme na Gaborone - Botswana Na njem mbu m gaa Africa ekpebiri m ịgafe South Africa na Botswana. Ka emechara, Brazil dị obere site na mpaghara Africa. Yaburu na odi ka ezigbo echiche ịgafe oke ma hu ma Botswana di…
Ihe ị ga-eme na Riga Obodo nke jikọtara ụlọ ọhụụ na nke ochie - Latvia
Ọ dị mma, tupu mụ ekwuo gbasara Riga n'onwe ya, gịnị kpatara m ji kwụsị ebe ahụ? N’ime agụụ ileta mba niile nke ụwa, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala, ọtụtụ n’ime ha, Latvia nọ n’etiti okporo ụzọ ahụ, ma n’etiti ụzọ ahụ bụ Latvia. N'agbata Estonia na Lithuania.😎 O juru m anya na uzo…
GỤKWUO Ihe ị ga-eme na Riga Obodo nke jikọtara ụlọ ọhụụ na nke ochie - Latvia
1- Gini mere m ji akwado Banco Inter? Ọ bụrụ na ịchọrọ akaụntụ nyocha nke ndị Brazil, maka ebumnuche ọ bụla, ma ọ bụ n'ihi na ị bi ebe a na Brazil, ma ọ bụ n'ihi ọrụ, ma ọ bụ na-abịa ọmụmụ, ma ọ bụ n'ihi njem, ma ọ bụ iziga ma ọ bụ nata ego site na mba ofesi gaa aro bụ na…
Luxembourg - Grand Duchy nke ikpe-azụ
Luxembourg bụ obere mba na Europe, agbataobi France, Belgium na Germany. Gịnịkwa mere o ji baa uru ileta? N'ihi na ọ bụ ya bụ Grand Duchy ikpeazụ na ụwa. Ma eleghi anya ị juo onwe gi: kedu ihe Grand Duchy? Azịza dị mfe: ọ bụ mba nke, n'ọnọdụ onye isi ala a họpụtara, nwere nnukwu Dọkịta…
GỤKWUO Luxembourg - Grand Duchy nke ikpe-azụ
Dika ekwere m nkwa na ọkwa nke ikpeazụ, aga m ekwu maka mpaghara nke asatọ. Na Ebee ka Asatọ nkeji? Ọ na-achịkwa isi anyị. Na Oghere, na Earth Orbit! N'ọchọ maka eserese satịlaịtị iji mata etu ọkụ dị na Brazil dum. Nke ahụ bụ, gụnyere isi 6 biomes ndị Brazil ...
Gini ga agwa gi na n’onwe anyi (mmadu) uwa enwetala uzo nke asaa? Ee, ozi ahụ dị mma, mana ọ dị mwute na ọ bụghị. N'ihi mkpokọ nke ekpokọtara n'oké osimiri, nke ebili mmiri na-ebu ma na-ejedebe n'ọtụtụ ebe na Pacific Ocean n'etiti California na Hawaii ...
Barcelona dị mma maka ndị na-amasịkarị ụkpụrụ ụlọ. Ọdụ ụgbọ mmiri na n'ime ime ebe ndị njem nleta edepụtara n'okpuru na-ewetara onye ọbịa ọ bụla ihe pụrụ iche na nke ahụ. Ọ bụrụ na nke a bụ njem mbụ gị na Barcelona, ​​soro ndụmọdụ ndị a: 1- Asụsụ: Ihe mbụ ị ga - achọpụta ...
Amaghị m etu esi ebido post a, yabụ m ga-agwa gị ihe echiche ya bụ. Ọ bụ ụtụ iji nye Katidral Notre-Dame, nke gbara ọkụ na Eprel 15, 04. Ọ bụ ihe kpaliri ọtụtụ mmadụ, tụkwasị n'ọgba aghara na mwute nke eziokwu ahụ na-eweta. Maka mụ na ndị enyi na ndị…
Dịka ekwere na ọkwa gara aga na oge ọzọ m gara kwuo maka Paris ga-ewetara gị ndụmọdụ ụfọdụ maka gị. (Ebe m na-eme nkwa a bụ nke a) Ọfọn mgbe ahụ ka oge na-aga iji mezuo nkwa ahụ. Ihe mbụ ị kwesịrị ime bụ ịtọ ntọala gị ...
Na post gara aga anyị gbara ajụjụ ọnụ na nwanyị Peruvian na onye njem Brazil na-ahụ maka Peru. (Can nwere ike ị nweta nnukwu ajụjụ ọnụ a site na ịpị ebe a). N'ihi ya m kpebiri iweta ịmata ihe gbasara tii coca dị na Peruvian. Kọmị Coca Ihe mbụ na-achọ ịmata bụ na a na-ebu coca tii ebe ahụ…
Taa, anyị ga-ekwu maka asụsụ na ihe kpatara ndị France ji emeghe imi ha mgbe anyị na ha na-asụ Bekee. Ọ dị mma, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile mụ na ha kwurịtara banyere France, na ndị nọrịị ebe ahụ, kwuru ihe abụọ mgbe niile: Na enwere ọmarịcha ebe dị ebube. Na na French hichaa ha imi ma ọ bụrụ na ị ...
Ndewo onye ọ bụla na taa anyị na-aga ikwu banyere mmiri mmiri! Na abụọ n'ime ndị ukwu. Kedu nke ka mma: Niagara Falls ma ọ bụ Foz do Iguaçu? Ma nke kachasị n'ime ha? Tupu anyị ebido, m ga-achọ ime ka o doo anya na nke a bụ ihe atụ e mere na data data m nwetara. Ajụjụ nke abụọ bụ ...
A ọkụ ọkụ na ọrụ ebube na njem mbụ na Chile
Ụbọchị ndị a, enwere m obi nkoropụ, ma ọ bụ n'ihi ihe ndị ọhụrụ ọhụụ ma ọ bụ ndị mmadụ na ezinụlọ m. Ihe ndị a bụ ajụjụ n'etiti diagnoses na ọrịa ndị na-achọ ọtụtụ okwukwe anyị. Nke ahụ chọrọ ịkwaga Chineke. N'ihi ya, m kpebiri ide banyere ọrụ ebube na njem. Ihe mere n'oge ...
GỤKWUO A ọkụ ọkụ na ọrụ ebube na njem mbụ na Chile
Kedu ka esi eji ígwè eme ihe n'egbughị ígwè
Ndewo onye ọ bụla, taa bụ ngwụsọ ọsọ na ọ bụla onye nkwado ọ bụla kwesịrị ịma. Mgbe ị na-etinye uwe gị niile na akpa azu, akpa akwa, ma ọ bụ akpa ọtụtụ mgbe, ọ na-agwụ na-abịa niile crumpled. Ma ọ bụrụ na ị na-aga nanị ya na akpa aka ma ọ bụ dị ka ojiji, o nwere ike ị gaghị enwe ígwè ...
GỤKWUO Kedu ka esi eji ígwè eme ihe n'egbughị ígwè
Ozi a bụ nke na - adịbeghị anya (29/01/2019) ANVISA ka etinyere asambodo International Vaccine Certificate. Gini mere ozi oma a diri gi onye njem? N'ihi na ugbu a ị nwere ike ị nye akwụkwọ nnabata mba nke Vaccination na Prophylaxis - CIVP - n'ụlọ! (Ma ọ bụ n'ebe ọrụ, ma ọ bụ na njem, ị na-ekpebi.…
GỤKWUO Ihe ị chọrọ ịmara banyere ọgwụ nje
Atụmatụ na Gramado - Brazil
Taa, anyị ga-ekwu maka obodo a mara mma nke dị na ndịda Brazil. Etu esi enweta? Gramado bụ ihe dịka 120km site na Porto Alegre, isi obodo Rio Grande do Sul. Ọ dị nwute na obodo ahụ enweghị ọdụ ụgbọ elu… Iji rute ebe ahụ ị nwere ike iji ụgbọ elu gaa Porto Alegre (POA) si ebe ahụ jiri ụgbọ ala (R $ 32,00 si ọdụ ụgbọ…
GỤKWUO Atụmatụ na Gramado - Brazil
Singapore na ihe nzuzo dị n'azụ chewing gum nke 500 dollar
Ọ dị mma, ọ bụrụ na ị na-eso blog a, mgbe ahụ ịmara ụzọ ị ga-esi ruo Marina Bay Sands, Iji cheta post dị ebe a: https: //1aviagem.com / singapore-na-ihe ngosi-na-na-marina-bay-sands / Ma n’ezie a ka nwere ọtụtụ ihe aga-eme maka obodo a. Yabụ, post a bụ nkwado na nke gara aga, yana ọtụtụ ịmata, ndụmọdụ na ebe ị ga-eleta. Trivia: Ihe mbu ị na - eme…
GỤKWUO Singapore na ihe nzuzo dị n'azụ chewing gum nke 500 dollar
Malaysia - Petronas Ụlọ elu
Ịga Kuala Lumpur na ịga eleta Petronas dịka ịga Rio de Janeiro na ịgaghị Cristo Redentor, ma ọ bụ gaa Paris ma ghara ịga Ụlọ Eiffel. Ya mere, m ga-agwa gị ntakịrị ihe banyere akwụkwọ ozi a sitere na Malaysia. Otu esi enweta ebe a: ụzọ kachasị mfe iji gaa Petronas ...
GỤKWUO Malaysia - Petronas Ụlọ elu
Ire, me chieen̄ kwun̄ me lek kè Mosis me lek. Na iche echiche na obodo a banyere "n'amaghị ama n'ime edemede". Ọ bụworị post nke abụọ na blọọgụ gbasara Malaysia. N'ihi na echere m na ọ bara uru. Ma taa, anyị na-aga n'akụkụ nke abụọ nke Malaysia, na-agafe Batu Caves. Ọ ga-ekwe omume ịbata ...
GỤKWUO Atụmatụ - Malaysia - Batu Caves
Agaghị m etinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị, kama dịka onye Brazil, enwere m ike ịme ya. Ma eleghị anya oge, ma n'oge na-adịghị anya. Eji m 8 Atụmatụ maka onye nhoputa aka iji mechie ntuli aka. Mee ka ọ rụọ ọrụ! 1- Lelee ozi: Iji malite mkparịta ụka, lelee ozi tupu ...
GỤKWUO Kedu ihe m ga - eme ruo oge ntuli aka Brazil?
Kedu ka ọ na-adị gị ịbụ onye nde mmadụ? (Vietnam)
Ndi mmadu ndi ozo, m kwuru banyere agha Vietnam na ihe ya na obodo ya na uwa dum kpatara na agha a na ebuso agha agha. (Can nwere ike lelee post a ebe a). Na aga na post m kwukwara okwu banyere otu ị ga - esi chekwaa ego iji mee “nke ahụ”…
GỤKWUO Kedu ka ọ na-adị gị ịbụ onye nde mmadụ? (Vietnam)
Kedu ka esi enweta ego iji gaa?
Ọfọn, isiokwu a pụtara n'ezie mgbe mkparịta ụka n'etiti ndị ọrụ ibe banyere Mega-Sena, lotus na lotteries ndị ọzọ. Ajụjụ bụ: Gịnị ka ị ga - eme ma ọ bụrụ na i nweta 1 nde reais? Na n'etiti mkparịta ụka ahụ, emesiri m ịhụ na ọtụtụ ihe maka m bụ ihe nkịtị ma ọ bụ ihe okike abụghị maka ọtụtụ ndị ...
GỤKWUO Kedu ka esi enweta ego iji gaa?
Kedu banyere Malaysia, gịnị ka anyị ga-ekwu?
Ezi akwukwo, post a bu ihe di egwu nke m nwere mgbe o tinyere Kuala Lumpur n'akwukwo akwukwo m na Asia. Kuala Lumpur bụ isi obodo Malaysia. (Ee, anyị gara Malaysia) na mbụ ujo m bụ ịhụ na ha na-akasị ndị Alakụba. Echere m na ha bụ ndị Buddha, ndị dị otú a ...
GỤKWUO Kedu banyere Malaysia, gịnị ka anyị ga-ekwu?
Vietnam - Gini ka ulo oru agha dika?
Na Post a anyị ga-ekwu maka agha, karịchaa agha Vietnam. Anyị gara na Museum Remnants nke War dị na Ho Chi Min ma wetara gị ụfọdụ mmụta. N'ebe a, anyị nwere ọchịchọ ịmata ihe na ohere iji gaa ebe a na-edebe ihe nkiri ma banye n'ogige ịta ahụhụ. Nke mbụ…
GỤKWUO Vietnam - Gini ka ulo oru agha dika?